छोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक भक्कनिए ! – Khabar PatrikaNp
छोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक भक्कनिए !
August 3, 2020 314
जीवनमा मानिसले बाच्नका लागि अनेक सर्घष गरी रहेका हुन्छन् । आफ्ना सन्तानका लागि उनीहरुको मेहतन पनि त्यस्तै हुन्छ । एउटा बाबाको माया आफ्नो सन्तान प्रति कस्तो हुन्छ रु त्यो त एउटा बुवालाई मात्र थाहा हुन्छ ।
कैलाली घर भइ हाल काठमाडौँमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका अर्जुन बिक एक छोराका बाबु हुन् । श्रीमतीले छोरा ४ महिनाको हुँदा छोडेर गएपछि अहिले अर्जुनले आफ्ना छोरालाई आमा र बाबा दुवै बनेर हुर्काई रहेका छन् । आमाको काख नपाएको छोरालाई उनी आफैँ आमा बनेर काँधमा राखेर लुगाले बाँधेर काममा जान्छन् ।
छोराको उज्ज्वल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् । अर्जुन बिक दैनिक रुपमा यसरी नै आफ्नो सन्तान बोकेर ठेलामा समान ढुवानी सेवा गर्छन् । सन्तान प्रतिको अथाह माया तथा जिम्मेवारी एउटा बाबाको परिश्रममा देखिने रहेछ । ‬त्यसको उदाहरण हुन् अर्जुन । हेर्नुस् रिक्सा चलाएर बाबुको जिम्वेवारी पुरा गरिरहेका एउटा बाबुको द’र्दनाक कथा
Prevएकै दिनमा एक हजारभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु
Nextभाइरल रिक्सा चलाउने अर्जुनकी श्रीमती रुदै मिडियामा ( भिडियो सहित )
सल्यान त्रीबेणि गाउँपालिका ५ का रुपलाल कुवरको मलेसियामा मृत्यु ।
आज बिहिबार भागवान बिष्णुको दर्शन गर्दै आजको दिनको सुरुवात गर्नुहोस !